Eli Roth Na-eduzi Killer Shark Movie MEG - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Eli Roth Na-eduzi Killer Shark Movie MEG
Eli Roth Na-eduzi Killer Shark Movie MEG
by admin June 16, 2015 456 echiche
Izu a kara akara ụbọchị iri anọ nke afọ jaws, nke izizi ewepụtara na ụlọ ihe nkiri na June 20, 1975. The Spielberg classic laghachi na ụlọ ihe nkiri na ngwụcha izu a na ememe, ma ugbu a ọ dị ka anyị ga-enwe ọhụụ ọhụụ maka shark nkiri iji nwee ọ toụ na nnukwu ihuenyo.
iche iche mebiri ozi na-enye obi ụtọ n'abalị a Ime ụlọ ọkụ/mbikọ onye nduzi Eli Roth na-ekwu okwu iji duzie mmegharị nke New York Times kacha ere ahịa Meg: Otu akwụkwọ nke ụjọ miri emi maka Warner Bros., oru ngo gestest nke di otutu uzo nke mmepe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ.
Akwụkwọ ahụ, nke Steve Alten dere, bụ banyere nnukwu shark prehistoric. Akụkọ a metụtara ụmụ nwoke abụọ jikọtara ọnụ iji kwụsị shark oge ochie nke na-eyi egwu n'ụsọ oké osimiri California. Megaladon, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ndị kachasị ike na nke kachasị ike na akụkọ ntolite, nwere ike iru ogologo ụkwụ 60.
Ma Disney na New Line Cinema gbalịrị ịmegharị akwụkwọ akụkọ Alten, n'otu oge ka agwachara Guillermo del Toro. Ederede ọhụụ a bụ Dean Georgaris dere, ọ bụ naanị izu ole na ole azụ ka anyị mụtara Warner Bros. na-etinye mmegharị na ngwa ngwa.
Meg a kọwara dị ka “Ogige Jurassic na azu, ”N'ihi ya, anyị nwere ike iche na ọ bụ ihe ịga nke ọma na - eme ka Jurassic World nwere obere ihe jikọrọ ya na ọkwa taa. Ndị na-egwu akwụkwọ akụkọ a echeela ọtụtụ afọ na mmegharị nwere ike ịme egwu ọzọ, m na-eche na Roth bụ nwoke zuru oke maka ọrụ ahụ.
Nke a bụ ihe m na-akpọ ozi ọma, ndị enyi.